"Dinihinareo ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy" — Jao. 5:29.
Tonga naka ny endrik'olombelona i Kristy mba hankato ny lalan' Andriamanitra. lzy no Tenin'ny Fiainana. Tonga ho filazantsaran'ny famonjena Izy, ary nanatanteraka ny tsipirian'ny lalina. Jesôsy dia teny, tari-dalana tsy maintsy raisina sy ankatoavina manokana amin'ny lafiny rehetra. Tena ilaina ny hitrandraka izany harena milevina izany, ny hitady sy hitahiry ny harena sarobidin'ny fahamarinana tahaka ny zava-tsarobidy. Ny fahatongavan'i Kristy ho nofo, ny maha-Andriamanitra Azy, ny fanavotana nataony, ny fiainany mahagaga any an-danitra amin'ny maha-solovava Azy, ny fanampian'ny Fanahy Masina, ireo lohahevitra velona sy goavana mikasika ny Kristianina ireo dia ambara manomboka ao amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy. Ny fatorana volamenan'ny fahamarinana no mamorona fatoram-pahamarinan'ny filazantsara, ary ny voalohany amin' izany, sady fototra, dia hita ao amin'ireo fampianarana manan-danja nataon'i Kristy. Nahoana ary; tsy tokony homena toerana ambony sy hasandratra ao amin'ny sekoly tsirairay eto amin'ny tanintsika ve ny Soratra Masina? Firifiry moa ny ankizy no mba beazina hianatra ny Baiboly ho toy ny Tenin'Andriamanitra, ary mihinana ny fahamarinany izay nofo sy ran'i Zanak'Andriamanitra!
"Fa hoy Jesosy taminy: "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy mihinana ny nofon'ny Zanak'olona sy misotro ny rany hianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao Amiko, ary Izaho kosa ao aminy" - Jao. 6:53-56. "Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao Aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika Izy, dia ny Fanahy izay nomeny antsika." - 1 Jao. 3:24.
Ilain'ny fianakaviana tsirairay avy ny mampiasa ny Baiboly ho boky fianarana. Volamena madio ny fampianaran'i Kristy, tsy misy na dia iray aza singa ratsy, raha tsy hoe miezaka ny mametraka izany ao ny olona miaraka amin'ny fahalalan'olombelona ary manao ny fandisoan-kevitra ho isan'ny fahamarinana. Ho an' ireo izay nandray ny fanehoan-kevitra diso momba ny Tenin'Andriamanitra, rehefa mandinika ny Soratra Masina amim-piezahana fatratra mba hahazo ny ampahany tena goavana amin'ny fahamarinana ao anatiny, dia hosokafan'ny Fanahy Masina ny masom-pahalalany, ary toy ny fanambarana vaovao ireo fahamarinana ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. - FCE, U. 385,386.